Nwatakịrị nwanyị snow: onye dere ya, ihe ọ gbasara na mmegharị ya | Akwụkwọ ugbu a
Encarni Arcoya | | Akwụkwọ
Nwa agbogho ọ bụghị akwụkwọ ọhụrụ. N'ezie, ọ pụtara na 2020 wee bụrụ onye na-ere ahịa kacha mma, dị ka akwụkwọ ndị ode akwụkwọ gara aga. Agbanyeghị na amaara ya nke ọma ma tokwa ya, akwụkwọ a kadịrị nke ọma maka mmegharị ya n'oge na -adịbeghị anya na usoro na Netflix, nke na -akwụghachi ndị na -ede akwụkwọ Spanish ụgwọ maka usoro Spanish ha.
Mana gịnị ka ị kwesịrị ịma gbasara nwa agbọghọ Snow? Ị ma onye dere ya? Kedu ihe ọ bụ? Ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ pụrụ iche ma ọ bụ enwere n'ihu? Anyị na -aza ihe niile, na ọtụtụ ndị ọzọ, n'okpuru.
1 Kedu onye dere nwa agbọghọ Snow?
2 Kedu ihe nwa agbọghọ Snow na -ekwu?
3 Kedu ụdị bụ Snow Girl?
4 Enwere m n'ihu nke akwụkwọ ahụ?
5 Enwere ebe obibi?
Kedu onye dere nwa agbọghọ Snow?
Ọ bụrụ na anyị ga -arụtụ aka na 'onye mere ihe ọjọọ' nke Nwa agbọghọ Snow pụtara na ụlọ ahịa akwụkwọ na 2020 mgbe ahụ bụ Javier Castillo kwuru. Ọ bụ onye edemede doro nsọ, ebe ọ bụ na akwụkwọ akụkọ a abụghị nke mbụ, mana nke anọ. Akwụkwọ akụkọ mbụ ya, "ụbọchị ahụ furu efu" na "ụbọchị ịhụnanya furu efu", kpaliri ya ka ọ nwee ihe ịga nke ọma na kemgbe ahụ ọ nọ na -aga nke ọma na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ọ wepụtara.
Mana onye bụ Javier Castillo? A mụrụ onye edemede a na Malaga na 1987. Edere akwụkwọ akụkọ mbụ ya mgbe ọ na -ejegharị n'ụgbọ okporo ígwè na -aga na ọrụ ya (dị ka onye ndụmọdụ ego) n'ụlọ ya. Ozugbo ọ gwụchara, na -eche na akwụkwọ akụkọ ya dị mma karịa nke ebipụtara, o kpebiri idegara ndị na -ebi akwụkwọ akwụkwọ ka ha nwalee chi ya. Agbanyeghị, ha jụrụ ya, o wee kpebie ibipụta onwe ya. N'ihi ya, mgbe ọ malitere inwe ihe ịga nke ọma (na anyị na -ekwu maka ire ihe karịrị otu puku akwụkwọ kwa ụbọchị na Amazon), ndị nkwusa malitere ịkụ aka n'ọnụ ụzọ ya.
Nke ukwuu nke na ọ nwere ike ịsị ọrụ ya dị ka onye ndụmọdụ ego ka o were oge ya niile na -ede akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, na -amara na ihe ịga nke ọma dị n'aka ya, dịka ọ dịla.
Kedu ihe nwa agbọghọ Snow na -ekwu?
Nwa agbọghọ Snow ahụ nwere atụmatụ ya bụ isi ihe omume nke mere na 1998 na nke na -eme ndụ adịghị mma nke nne na nna gbanwere kpamkpam. Mgbe nwa nwanyị di na nwunye dị afọ 3 na-apụ n'anya na-enweghị akara, onye ọ bụla na-efu efu, n'amaghị ebe ọ ga-ele anya ma ọ bụ otu esi enyere ndị nne na nna aka na-enweghị azịza gbasara ebe nwa ha nwanyị nọ.
N'adịghị ka akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, na Castle a, ọ na -ekpughe mmetụta mmetụta ndị ahụ metụtara, ihe ha na -ata ahụhụ na etu ha si enwe mmetụta, ihe na, n'akwụkwọ ndị gara aga, amachaghị nke ọma.
Anyị na -ahapụrụ gị nkọwapụta:
Ebee ka Kiera Templeton nọ? New York, 1998, Ekele Ekele. Kiera Templeton, na -apụ n'anya n'ime igwe mmadụ. Mgbe o jisịrị nlegharị anya n'ime obodo ahụ, mmadụ hụrụ ntutu ole na ole n'akụkụ uwe nwanyị ahụ yi. N’afọ 2003, n’ụbọchị Kiera gaara afọ asatọ, nne na nna ya, Aaron na Grace Templeton, na-enweta ngwugwu dị ịtụnanya n’ụlọ: teepu VHS nwere ndekọ nkeji nkeji nke Kiera na-egwuri egwu n’ime ụlọ na-amaghị. Mgbe o rechara ihe karịrị 650.000 nke akwụkwọ akụkọ gara aga, Javier Castillo na -enyochakwa nwa agbọghọ ahụ Snow ọzọ, njem gbara ọchịchịrị n'ime omimi nke Miren Triggs, nwa akwụkwọ nta akụkọ nke na -amalite nyocha yiri ya wee chọpụta na ndụ ya dị ka nke a. Ihe ndị Kiera juputara na amaghị ama.
Kedu ụdị bụ Snow Girl?
Nwanyị Snow, dị ka ọtụtụ akwụkwọ Javier Castillo, Ọ bụ n'ime ụdị nke enyo enyo. Buru n’uche na ọ bụ maka ikpughere ihe omimi, ọ bụ ya mere onye dere ji jiri usoro iheomume abụọ nke ọ na -etinye.
Ụzọ ederede a dị ize ndụ na ọtụtụ ndị na -agụ akwụkwọ na -amalite na nke mbụ nwere ike ịda mba n'ihi na oge ọ bụla ị maghị ma ị nọ ugbu a, n'oge gara aga. Mana nke ahụ bụ naanị na mbido, mgbe ị ka na -amaghị ndị odide ya; mgbe ahụ ihe na -agbanwe na ihe gbagọrọ agbagọ na nkata ahụ abụghị naanị na -enyere gị aka ịghọta ihe kpatara ndị na -eme ngagharị iwe ji dị ka nke a, mana ị ga -achọpụta ozugbo usoro iheomume sochiri (na enwere ihe omimi na ha abụọ).
Enwere m n'ihu nke akwụkwọ ahụ?
Javier Castillo bụ onye edemede na -achọkarị ịjikọ akwụkwọ ya, ma ọ bụ mee ya n'ihu. O mere ya na "ụbọchị ara furu efu", nke chere na ọ bụ akwụkwọ abụọ, na mgbe ihe ịga nke ọma nke mbụ gasịrị, ọ laghị azụ gbada ọrụ ka ọ nweta akụkụ nke abụọ. Mana kedu maka nwa agbọghọ Snow? Enwere akụkụ nke abụọ?
Nakwa, onye edemede n'onwe ya zara ajụjụ a n'aka ndị na -agụ ya, dozie okwu a. Ma ọ bụ na, n'adịghị ka akwụkwọ ndị ọzọ, nke a agaghị abụ akụkụ nke saga ọ bụla, yabụ anyị na -ekwu maka akwụkwọ nwere mmalite na njedebe, na -enweghị ihe ọzọ. N'ezie, n'ime ibe ya anyị nwere ike ịhụ agwa ndị, ọ bụrụ n'ị gụrụ ọrụ ndị gara aga, ga -ada gị nke ọma. Yabụ, n'ụzọ, ọ bụ ihe na -aga n'ihu, ya na agwa ndị ọzọ, nke akwụkwọ akụkọ gara aga.
Enwere ebe obibi?
Anyị ga -adọ gị aka na ntị na, dị ka ọ dị n'ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ, nwa agbọghọ Snow ga -emegharị ka ọ bụrụ ezigbo onyonyo. Kpọmkwem, ọ dịla Netflix onye nwere mmasị inweta ikike wee dekọọ usoro.
Ruo ugbu a, amabeghị ọtụtụ ihe banyere usoro ọhụrụ a, mana akụkọ ahụ pụtara na Eprel 2021 ma na -eche na Netflix na -eme ngwa ngwa mgbe ị na -eme mkpebi, ihe kacha dịrị nchebe bụ na ikekwe site na 2022 ma ọ bụ 2023 anyị nwere ike na -ele ya.
Na mgbakwunye, onye ode akwụkwọ nwere obi ụtọ dị ukwuu n'ihi na Ọ bụghị Snow Girl bụ naanị mmegharị nke akwụkwọ akụkọ ya. Ọzọkwa, na nke a, site na Globomedia na DeAPlaneta, ha na -arụ ọrụ n'usoro ga -agụnye akwụkwọ akụkọ abụọ mbụ nke onye edemede: "ụbọchị ara furu efu" na "ụbọchị ịhụnanya furu efu." Enweghị ihe ọ bụla mara banyere ha ruo ugbu a, mana n'ezie akụkọ banyere ha ga -abịa n'oge na -adịghị anya.
Ị gụọla akwụkwọ akụkọ The Snow Girl? Kedu ihe ị chere maka ya? Gwa anyị echiche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nwa agbogho
Etu ilu nke ime ụlọ 622